Ikhaya STARS E-EUROPE I-Lucas Digne Childhood Indaba I-Untold Biography Amaqiniso
I-LB inikeza iNdaba Egcwele ye-Football Genius eyaziwa kakhulu ngesiteketiso "Luca". Indaba yethu yeLucas Digne Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso ikulethela i-akhawunti ephelele yemicimbi ephawulekayo kusukela ngesikhathi sakhe sobuntwana kuze kube manje. Ukuhlaziywa kuhilela impilo yakhe esemncane, isizinda somndeni, impilo yomuntu siqu, amaqiniso omndeni, indlela yokuphila namanye amaqiniso amancane - aziwayo ngaye.
Yebo, wonke umuntu uyazi ngekhono lakhe lokuhlukumeza abahlaseli ekutholeni impahla. Kodwa-ke, bambalwa kuphela ababheka i-Biography kaLucas Digne's ethakazelisa ngempela. Manje ngaphandle kokunye, ake siqale.
Amaqiniso weLucas Digne Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Imvelaphi Yokuphila Nokuqala Komndeni
Kwesobunxele Lucas Digne wazalwa ngosuku lwe-20th lukaJulayi 1993 eMeaux commune eFrance. Wayengowesibili ezinganeni ezimbili azalwa ngunina, uKarine Digne futhi kuyise, uPhilippe Digne.
ULucas Digne wazalelwa abazali abazali abaziwa kancane ngaye. Isikweletu Sezithombe: I-Francefootball.
Isizwe saseFrance esingesilungu lesitshalo sabadlali bohlanga lwabamhlophe abanezimpande ezingabonakali sikhuliswe eMeaux eFrance lapho sakhulela khona kanye nomfowabo omdala - uMathieu Digne.
ULucas Digne wakhuliswa eMeaux commune eFrance. Isikweletu Sezithombe: I-Francefootball futhi I-WorldAtlas.
Ukukhula ezweni lakhe lokuzalwa eMeaux France, uDigne wanyathela izindlela zomfowabo omdala uMathieu ngokudlala ibhola esemncane kakhulu. Ngenkathi uDigne ekulo, wayetshela noma ngubani onaka ukulalela ukuthi uzoba yingcweti kwezemidlalo futhi abe necebo lokuqokomisa iphuzu lakhe.
Amaqiniso weLucas Digne Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - I-Education ne-Career Buildup
Njengoba uDigne osemncane ethuthuka ngobudala nangobudala, izintshisekelo zakhe ebholeni zaba umdlandla. Ngenhlanhla, ukubhaliswa eklabhini yasekhaya uMareuil-Sur-Ourcq kwamnika isikhala esanele sokuthola ibhola lokuncintisana futhi okubaluleke kakhulu, wanciphisela phansi izinkomba zakhe zokuba yingcweti.
Ngesikhathi uDigne esemdala ngeminyaka eyi-9 e-2002, wajoyina iklabhu engomakhelwane, iCrepy-en-Valois lapho engazange athuthukise khona kuphela kubuciko obabuthole eminyakeni engu-3 yokuziqeqesha eMareuil-Sur-Ourcq kodwa wahlala evulekile ngokufunda ezinye izisekelo.
Ikhadi kamazisi likaLucas Digne eCrepy-en-Valois. Isikweletu Sezithombe: I-Francefootball.
Amaqiniso weLucas Digne Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphila Okuqala Kwomsebenzi
Ekuphakameni kokubandakanyeka kwebhola likaDigne neCrepy-en-Valois, waba nzima kakhulu ukungayinaki njengoba izinwele zakhe ezicwebezelayo zaphenduka uhlobo lokumaka olwenza ama-scouts avela kuLille alandelela ukuma kwakhe okumangazayo ngesikhathi semidlalo yokuncintisana.
Ngakho-ke, i-12 eneminyaka engu-ubudala ubudala yebhola lezinyawo yathunyelwa ohlelweni lwentsha lweLille lapho akhuphuka khona emabangeni eminyakeni eyalandela ye-5 ukuze ekugcineni agcine ukukhushulelwa eqenjini lokuqala lekilabhu. Uqhubekile nokusayina inkontileka yakhe yokuqala nezobuchwepheshe neqembu laseFrance ngoJulayi 2010.
ULucas Digne odlalela uLille njengochwepheshe. Isikweletu Sezithombe: FMS.
Amaqiniso weLucas Digne Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Umlando Wendlela Yokudumisa
KuDigne, uLille wayengewona nje umhlaba wokuzalela njengoba egxile ekufezeni iphupho lakhe lobuntwana lokudlalela iParis Saint Germain. Ukuthuthuka kuchaza ngokuhamba kwakhe ngokushesha “ekilabhini yamaphupho” kwi2013 ngemuva kokuchitha amasizini amabili eLille.
I-PSG isayine uLucas Digne waseLille kwi2013. Isikweletu Sezithombe: I-Sportskeeda.
Ngenkathi uku-PSG, uDigne bekubonakala sengathi usethelwe ukuthi adlulise isikhathi emabhentshini. Akaze athole nethuba lokuziqalela ekilabhini lapho enziwe umdlali wasemuva wokufika lapho afike wakujwayela ukubamba indawo engasetshenziswanga emidlalweni eminingi ebalulekile yamaphupho akhe. Ukuyicaphuna yonke le nto, ubolekiswe kwiRom ngesizini ye2015 / 2016 ngemuva kokuhlala nje iminyaka emibili namaParisians.
Amaqiniso weLucas Digne Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphakama Ukudumisa Indaba
Yize uDicne echithe unyaka nje e-Roma, ukubonakala kwakhe kwekilabhu kungaphezu kwalokho akuqopha ku-PSG kumasizini amabili, futhi akazange abhekwe njengebhanoyi e-Barcelona lapho athuthela kwi-2016 futhi wachitha amasizini amabili edlala eceleni kwama-greats ebhola enjengebhola U-Lionel Messi.
Ngokushesha phambili kuze kube yimanje, uDigne udlalela i-Everton FC ngemuva kokusayinelwa ekilabhini e2018. Akangabazi ukuthi ujabule ngasohlangothini lwesiNgisi lapho aqophe khona iningi lamagoli emsebenzini wakhe ngesikhathi sokubhala. Abanye, njengoba besho, umlando.
ULucas Digne usesimweni esihle sokushaya amagoli e-Everton. Isikweletu Sezithombe: Thewest.
Amaqiniso weLucas Digne Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Imininingwane Yokuphila Ubudlelwane
Ukukhuphuka kukaDigne ngezigaba zikaLille kuhlale kuyinto ebalulekile kuye eminyakeni eminingi, ikakhulukazi ngoba wahlangana nentombi - uTiziri Digne phakathi nalesi sikhathi. Izintombi zothando ezazineminyaka yobudala engu-16 ngaleso sikhathi somhlangano wazo wokuqala, zaba yimbhangqwana futhi zaqhubeka nokushada ngoDisemba 2014.
ULucas Digne nenkosikazi yakhe baqala njengabathandana nabasakhulayo. Isikweletu Sezithombe: I-Instagram.
UTziri uphakathi kwezinye izinto ongumlingisi wokuqina nobungcweti obheke phambili ekwakheni umsebenzi wobuntatheli. Usanda kubeletha ingane yabo yokuqala (indodana) ngo-Ephreli 2019 ukuthi ahambise umndeni ezweni elisha lonke.
UDigne noTiziri babenengane yabo yokuqala ngo-Ephreli 2019. Isikweletu Sezithombe: I-Instagram.
Amaqiniso weLucas Digne Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Amaqiniso Okuphila Komndeni
Kude nobuthongo obunzima, ukumaka okusondelene nokuqothulwa kwebhola kumaTofu, umndeni ubaluleke kakhulu kuDigne. Sihamba nawe empilweni yomndeni wakhe.
Mayelana nobaba kaLucas Digne: UPhilippe ungubaba kaDigne. Uke wasebenza endlini yokushicilela eLizy-Sur-Ourcq eduzane neMeaux ngesikhathi esakhula esemncane. Ubuye wadlalela iqembu lokuqala lekilabhu yabafana besokunxele emuva uMareuil-Sur-Ocrcq. Kuyavela ukuthi waba negalelo elikhulu ekwakheni ukunyuka kukaDigne ebholeni futhi wadlala izindima ezibalulekile ekukhuleni kwakhe kuze kube manje.
Mayelana nomama kaLucas Digne: UKarine ungunina kaDigne. Njengomyeni wakhe namadodana akhe, umkhulu ebholeni futhi wake wasebenza njengonobhala wekilabhu yabadlali abasezingeni likaDigne uMareuil-Sur-Ocrcq. Umama onothando wezingane ezimbili ugcina amathebhu asondele emadodaneni akhe ikakhulukazi uDitne osanda kubuya nomzukulu wakhe wakamuva.
ULucas Digne wakhuliswa ngabazali okwaziwa kancane ngaye. Ama-Credits Wezithombe: ClipArtStation neFotballWikia.
Mayelana nezingane zakubo kaLucas Digne: UDigne unomfowethu obonwe njengoMathieu. Umfowethu omdala oxoxa izindaba ezifanayo zobuntwana noDigne naye waba nokwakheka kwakhe emsebenzini eLille kodwa kazange abe ngongoti. Kodwa-ke, akayeki ukuxhasa uDigne ozibophezele ekwenzeni igama elihle lomndeni ebholeni lasekhaya eliphakeme.
Mayelana nezihlobo zikaLucas Digne: UDigne unogogo nomkhulu bakhe abangaziwa yize kungekho amarekhodi omalume bakhe, umshana wakhe nomshana. Ngokunjalo, umzala wakhe wesokunxele emuva usazokhonjwa ikakhulukazi emicimbini yokuphila kwakhe esemncane kuze kube yimanje.
Amaqiniso weLucas Digne Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Amaqiniso okuphila komuntu siqu
Yebo, uDigne ubukeka kahle ukuthi ukunakwa kwenkantolo, ubuntu bakhe obudonsa inhliziyo yanoma ngubani onokuhlangana naye. Izici zomuntu odonsayo kaDigne ezithatha imvelaphi yakhe kusuka kuCancer zodiac sign zifaka phakathi kokuthola kwakhe isifiso sokuvelela, ukukhombisa ubuhlakani bezemizwa nokuqina kokuqina.
Izintshisekelo zakhe nezinto azithandayo zihlanganisa ukubona ukubona, ukulalela umculo ikakhulukazi i-R&B neRap. IDigne ibuye ihambisane nemidlalo ye-tennis ne-basketball futhi ichitha isikhathi esiningi nomndeni nabangane.
Ukubona ngenye yezintshisekelo zikaLucas Digne. Isikweletu Sezithombe: I-Instagram.
Amaqiniso weLucas Digne Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Ama-Lifestyle Facts
Inani lemakethe lezigidi ezingama- € 30 ngesikhathi sokubhala kuhlanganiswa nesipiliyoni esingaba yishumi sebhola lochwepheshe lisungule iDigne kuligi yabathola abahola ngenani eliphakeme elimangalisayo.
Uphila impilo yobukhazikhazi ehlale ibonakala emaphethini akhe okusebenzisa imali, izindlu kanye nokunambitheka okungajwayelekile kwendlu yokuhlala lapho idlala ngaphandle kweligi yaseFrance. Mhlawumbe okuheha kakhulu ukuqoqwa kwezimoto zakhe eziphethwe yimikhiqizo efana noFerrari, Mercedes no-Audi.
ULucas Digne ucela ukulandela omunye wabagibeli be-Audi yakhe. Isikweletu Sezithombe: I-Wtfoot.
Amaqiniso weLucas Digne Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Amaqiniso angaziwa
Ukusolwa nokwazi akufani. Uyacelwa ukuthi uthole amaqiniso angezansi noma angaziwa ngo-Lucas Digne.
Ukubhema Nokuphuza: IDigne ayinawo umlando ngogwayi, futhi ayinikezwa ukuphuza ngesikhathi sokubhala. Kunalokho ulwela ukuba sempilweni enhle futhi ozimele kunoma yini angamenza anciphise ukusebenza kwakhe.
Ama-tattoos: Unama-tattoos avelele ezingalweni nasemagama aphikisanayo (Angisoze Ngahamba Ngodwa) esifubeni sakhe esake saqondiswa kabi ukuthi kwakuwukuthanda kwakhe iLiverpool. Ukubeka irekhodi eliqondile ngalolu daba, uDigne wachaza ukuthi kwakuyisipho kubazali bakhe.
I-tattoo yesifuba sikaLucas Digne ifundeka ukuthi "Angisoze ngahamba ngedwa". Isikweletu Sezithombe: I-Instagram.
Ukuzibophezela Kwamanye Amazwe: Ukudlala kwesobunxele kweqembu lesizwe laseFrance futhi kumelele zonke izigaba kwakha i-U16 kumazinga we-U21. Udlale iFrance ngesikhathi indebe yomhlaba ye-2014 futhi ubelokhu emile eqenjini laseFrance kule ndebe lomhlaba le2018 FIFA.
Inkolo: Akukaziwa okuningi ngesikhundla sikaDigne ezindabeni zokholo, kepha unikeza inking yokuba yikholwa ngokuwela uqobo enkundleni yezemidlalo. Umkhuba onjalo udumile phakathi kwamaKristu ikakhulukazi amaKatolika.
QAPHELA QAPHELA: Siyabonga ngokufunda i-Lucas Digne yethu Yobuntwana Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso. At LifeBogger, silwela ukunemba nokulingana. Uma uthola into engabonakali kahle, sicela wabelane nathi ngokuphawula ngezansi. Sizohlala sibazisa futhi sihlonipha imibono yakho.